Ra?isal wasaaraha Soomaaliya oo ugu yeeray Barclays in uu ka laabto go?aankiisa xawaaladaha – Radio Daljir
Seteembar 24, 2013 3:33 b 0
Geneva, September 24,, 2013 – Ra?isal wasaaraha Soomaaliya Cabdi faarax Shirdoon oo maanta ka qayb-galaya shirka xuquuqda Insaanka ee Geneva ayaa baaq u diray Barclays, kaas oo qorshaynaya in uu gebi ahaanba xiro khaanadaha keydka ee shirkadaha cawaaladaha Soomaalida 30 September.
Mudane Shirdoon waxaa uu sheegay in aysan wax saamayn ah ku yeelan doonin Argagixisada talaabada uu qaadayo Barclays, balse waxaa uu taas bedelkeeda shaaciyey in ay u darsan doonaan malaayiin ruux oo jooga gudaha Soomaaliya iyo xeryaha Qaxootiga.
Ra?isal wasaaraha oo laga soo saaray war-saxaafadeed ayaa bankiga ugu baaqay in uu ka laabto go?aankaas oo sababi kara arrimo bini?adanimo, macaluul iyo gaajo hor leh oo ka dilaacda gobolka Barriga Afrika, xili dadka Soomaaliyeed ku tiirsan yihiin ehelkooda debeda.
Docad kale waxaa uu ra?isal wasaaruhu tilmaamay in xawaaladaha lacagta loo soo marsiiyo qaar ka mid ah hay?adaha maxaliga ah ee ka shaqeeya arrimaha bini?adanimo ee dalka, kuwaas oo hadii lacagta laga joojiyo ay saamayn hor leh soo wajahayso dadka ay daryeelka siiyaan.
Baclays ayaa horey ugu dhawaaqay in ay xirayaan keydadka lacagta ee xawaaladaha Soomaalida ay ku leeyihiin Bankiga, waxayna sabab uga dhigeen in lacagta ugu badan loo marsiiyo xawaaladaha kooxaha Argagixisada ee khatarta ku ah amniga dunida.
Go?aanka Barclays ee 30 September waxaa uu saamayn doonaa 250 xawaaladood oo ay ku jiraan 25 ay leeyihiin Soomaalida, madaxdii Soomaalida ee ka qayb gashay shirkii Brussels ayaa sidoo kale baaq kan al mid ah u jeediyey bankiga Barclays.
Cali dheere ?dalalka ku jira howl-galka AMISOM ayaan ka fulin doonaa weeraradii Nairobi oo kale?